Maxaan ubaahanahay inaan ku xisaabtamo si aan u doorto Qaybintayda? | Laga soo bilaabo Linux
Maxaan ubaahanahay inaan ku xisaabtamo si aan u doorto Qaybintayda?
Waa la ogyahay in gudaha GNU / Linux waxaa jira qaybinta dhammaan dhadhanka, iyo dhammaan dhadhanka. Xitaa adeegsadayaasha qaar ayaa ka cagajiidaya inay adeegsadaan, waxay ku dhahaan wanaaggan cillad iyagoo qiil u siinaya inaysan garanayn midka ay ka dooranayaan kuwa badan.
Akhristayaasha (iyo asxaabta) kuwaas oo inta badan soo booqda Laga soo bilaabo Linux Waad ogtahay, isla maanta waan rakibay Debian iyo berri archlinux, marka loo eego dhinaca kale. Laakiin tani macnaheedu maaha inaan si fiican u qeexin waxa aan u baahanahay. Waxaan ahay isticmaale jecel inaan wax barto waxaan leeyahay cillad weyn: Nooca. Laakiin ka hadli maayo naftayda, haddaba aan ku noqonno mowduuca hore
Maxaan sameynaa markaan dooranayno Qaybinta? Gaar ahaan waxaan filayaa in jawaabta koowaad ee su'aashani ay tahay su'aal kale (iska cafi shaqada): Maxaan uga baahanahay Qaybinta? Tusaale ahaan, waxaan haystaa saaxiib kaas oo horumariya. Markaan ka hadalno wuxuu igu dhahaa:
Adeegso Linux Mint 9 maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan is hagaajiyo inta ugu macquulsan. Kuma khasaarin karo aniga oo dejiya dhammaan waxyaabaha ku jira nidaamka aan isticmaali doono. Aniguna waxaan u baahanahay waxa ay rakibto si aan u shaqeeyo oo aan u ahaado mid deggan sida ugu macquulsan. Waa isticmaali karaa Debian Xasilloon, laakiin xirmooyinka aan u baahanahay ma jiraan, waan isticmaali karaa Tijaabada Debian, laakiin ma qaadi karo halista - sida dhifka ah ee ay noqon karto - in wax uun i fashilmi doonaan cusbooneysiinta kadib. Linux Mint waxay kaloo leedahay PPA-yada Ubuntu, halkaas oo aan ka helo waxyaabo badan oo faa'iido leh oo ugu yaraan kiiskeyga, wax walba waxay shaqeeyaan marka ugu horreysa.
Xaqiiqdii wuu saxan yahay. Kiiskeyga dhib malahan hadaan maanta rakibo halka o Debian oo waxaan ku qaataa maalin dhan dejinta, maxaa yeelay shaqadaydu way oggoshahay umana baahna waqtigaas badan. Saaxiibkay waa isticmaale ubaahan inuu isla markiiba shaqeeyo iyo Linux Mint 9 (oo u dhiganta Ubuntu 10.04) waxay ku siinaysaa suurtagalnimadaas.
Laakiin waxaan leeyahay saaxiib kale oo aan ahayn horumariye laakiin muusikiiste, oo adeegsada LMDE (oo leh meelaha wax lagu ururiyo). Laakiin marka hore, wuxuu soo saaray liiska xirmooyinka uu uga baahnaa Ubuntu Studio taas oo waxtar laheyd haddii aysan dhibaato ka qabin kaarka codka.
Kuwani waa laba tusaale oo cad oo baahiyaha ujeeddada ah. Marka Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan u dooranno qaybinta ayaa ah, ogow waxa aan ugu baahan nahay. Laakiin waxaa jira qodob kale, kheyraadka aan haysano. Haddaan haysanno 8GB oo RAM ah, i5 iyo 500Gb meel disk ah, wax waliba waa inoo fiicnaan lahaayeen, laakiin isla sidaas oo kale ma dhaceyso marka kumbuyuutarkeennu uusan ka badnayn 512 Mb oo RAM ah Run?
Marka waxa labaad wuxuu noqon lahaa helno qaybinta na siinaysa waxa aan u baahanahay ee xirmooyinka ah, laakiin taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si raaxo leh ugu shaqeyno anagoon u hureyn qalabka la heli karo. Waxaa sidoo kale galaya inuu ciyaaro Indhaha gudaha Degaanada Desktop.
Iyo inkasta oo aan kala shaandheyn karno raadinta Qaab dhismeedka habboon, Waxaan kaaga tagi doonaa shuruud sadexaad oo ugudanbeysa si aad uxisaabto, laba su'aalood oo laxiriira: Miyaynu leenahay xiriir wanaagsan oo internet ah oo aan heli karno si aan u helno bakhaarrada? Ma waxaan u baahanahay inaan si joogto ah u cusbooneysiino?
Waan ogahay dadka wali isticmaala debian-etch, iyo maahan dhaqaale la'aan, laakiin sababta oo ah noocaas waxay leeyihiin wax kasta oo ay ugu baahan yihiin shaqadooda maalinlaha ah, uma baahna inay cusbooneysiiyaan wax walba iyo sida wax waliba u shaqeeyaan: Maxaa loo badalay? Waana mid run ah. Mararka qaar (kuwa naga mid ah ee qaba xanuunka 'versionitis') waxaan dooneynaa inaan heysano xirmooyinka ugu dambeeya marka xaqiiqda, waxa aan hada heysano si fiican ayey u shaqeeyaan. Laakiin markasta ma lihin marin Internet, ama isku xirnaan wanaagsan si aad u soo dejiso.
Isku soo wada duuboo, waxaa jira 3 arrimood oo ugu muhiimsan tixgelinta:
Maxaan ugu baahanahay Qaybinta?
Kheyraad noocee ah ayaan haysannaa?
Ma leenahay internet? Ma waxaan u baahanahay inaan helno maalin walba meelaha lagu kaydiyo oo aan si joogto ah ula socono?
Fikirka labaad, waxaan ku dari doonaa shuruud dheeri ah oo dheeri ah: Bulshada iyo Dukumintiyada. Laakiin dabcan, si aan tan u gaarno waa inaan marnaa seddexaad 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Maxaan ubaahanahay inaan ku xisaabtamo si aan u doorto Qaybintayda?
Ninyahow, waxaan u maleynayaa in halkan loo badalay xaqiiqda ah inaadan wax ka bixin waxyaabo kale, haddii kale wax badan isma beddelayso
Maqaal aad u wanaagsan, marwalba waxaa iisoo jiitay sii deynta, iyo miis dhameystiran oo howlahayga maalinlaha ah.
Arch + Xfce ama Arch + Gnome ama Arch + KDE. Xulku waa adiga .. 😛
Waxaan isku dayi doonaa arch goor dambe, laakiin waqtigan iyo isma waafaqsana gnome oo kde waa iska caadi aniga, laakiin ma dafirayo inay aad u dhameystiran tahay. Kaliya xfce ayaa hadhay.
Xfce Rulez !!! Fudud, quruxsan, fudud, dhakhso badan ... Maxaad kale oo aad weydiisan kartaa?
Taasi waa sax, waa midda aan hadda isticmaalo oo ay si fiican u shaqeyso.
sii deynta ...
Desktop Shaashad buuxda
Inbadan oo aan akhriyo, waxay u egtahay sida Arch + KDE HAHAHA.
Kde waa mid aad ufiican oo dhammeystiran laakiin aad iyo aad uqurux badan aniga, waxaan ahay uun isticmaale caadi ah, waxaan kaliya u isticmaalaa laptop-ka si aan u sameeyo warbixinno, aqriyo pdf, boostada iyo wicitaanka fiidiyowga ee macmiilka. Haddii aan rakibo kde waxay joojineysaa kala bar adeegyada.
HAHA Weli wax badan ayaan ka furayaa KDE, Akonadi… Nepomuk, ma isticmaalo iyaga, waxaan u furey si aan u keydiyo qalabka haha.
Ma aqaano sababta aad u leedahay 2 Gb oo RAM ah ¬¬
Ma aqaano sababta aad u leedahay 2 Gb oo RAM ah. KDE miyaanay ahayn waxa "ugu dhammaystiran"? Marka maxaad ugu isticmaali weyday sidii la rabay?
Anigu ma isticmaalo Nepomuk ama Akonadi, waxa ay bixiyaan uun ima xiiseeyaan, doqon iyo caajis midna ma fidiyo ... ma arko wax diidmo ah taas. 0_oU
Xun? Hagaag, adigu uma adeegsanaysid KDE sidii la rabay, sida dhamaan desktop-ka macneheedu yahay.
Haa haa ... markaa waxaan u maleynayaa haddii aan hubiyo kombuyutarkaaga, ma helaysid wax Gnome daemon / adeegyo naafo ah sax? kaalay ... Gnome-Keyring, mise wax sidaas oo kale ah? LOL !!!
Waad ogtahay inaysan sidan noqon doonin ...
Caqli gal ma ahan in loo isticmaalo 100MBs oo RAM ah (ama ka badan) waxyaabo aanan waligey isticmaalin, sidaa darteed waan joojiyaa.
Oops waxa uu yidhi…. Gnome maxaa ....? Ina Haber, waxaan ku xusuusinayaa inaan isticmaalayo "saafi" Xfce .. Haddii aan xoogaa Gnome ah rakibay, waxay ahaan lahayd ku tiirsanaanta qasabka ah ee Xfce ama mid ka mid ah codsiyada aan isticmaalo. Laakiin laga bilaabo Xfce waxba kama joojiyo. Waxaan u isticmaalaa sidii ay ahayd inay ahaato 😀
Xaaladdayda. Arch waa wax weyn aniga.
Badanaa anigu kuma bixiyo adeegga internet-ka waqtigiisa, waxaan maareeyaa inaan rakibo ama cusbooneysiiyo 'Distro'.
Ka shaqee oo wax ka baro jaamacadda, Looma oggola is-waafajinta, barnaamijyada ama dhibaatooyinka qalabka kombiyuutarada dugsiga. Tan iyo markii aan kugula taliyay ku rakibida Arch Linux shaybaarada iyo xafiisyada.
Kaliya waa Arch.
Waxaan sidoo kale leeyahay Nepomuk iyo Akonadi waa la xiray maxaa yeelay aniga sidoo kale ma adeegsado taasna micnaheedu maahan inaanan ka faa'iideysan awooda kde, kaliya ma isticmaalo adeegyadan mana aha wax macno samaynaya inay halkaas ku cunaan ilo. Xitaa sidaas oo ay tahay, awoodda iyo awoodda qaabeynta ee kde sii wado inay aniga i siiso laguma soo bandhigi karo muraayad kale, taasi waa sababta aan u isticmaalno kde.
KDE iyada oo aan loo baahnayn Akonadi iyo Nepomuk, durba waa ay ka dhammaystiran tahay Gnome, Xfce iyo inta kale ... si fudud maxaa yeelay waxay ii oggolaaneysaa in aan qaabeeyo wax walboo aanan taaban feylasha qaabeynta, si fudud taas awgeed waa ka sii dhameystiran tahay.
Ku soo dhowow barta… hal isticmaale KDE ilaa mid kale 😉
Xanaaqsan !!! Haa, waan ogahay, waad ii jawaabi doontaa aniga waxaan ahay qof xagjir ah, waxaan ahay xamaasad, waxaana kuu sheegayaa haddii aad tahay !!!, khaniisnimadu waxay u xun tahay caafimaadkaaga JAJAJAJAJA. Wax walba waad fureysaa, waxaan la yaabanahay, maxaad u isticmaashaa KDE? Waxaa ka wanaagsan KDE dhexdhexaad, hehehehehe.
HAHAHAHA Ma ihi taageere, waxaan aqoonsanahay waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku saabsan Gnome2, iyo waliba guulaha qaar ee Gnome3 iyo Unity, kaliya waxaan wali isticmaalaa KDE maxaa yeelay waan ka jeclahay si ka wanaagsan.
KDE iyada oo aan loo baahnayn Akonadi iyo Nepomuk, horeba way uga dhammaystiran tahay Gnome, Xfce iyo inta kale ...
Ha noqon qof xagjir ah. Xaqiiqda ah in desktop-ka la dhameystiray waxay kuxirantahay baahida isticmaaleha. KDE waxay leedahay waxyaabo aadan xitaa isticmaalin, isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda inta hartay. Ha iibin qiiqa sidoo kale, maxaa yeelay sifiican ayaad u ogtahay in si loo baabi'iyo Nepomuk, Akonadi iyo Virtuoso, waa inaad taabataa feylasha qaabeynta guriga / guriga ...
Xaqiiqda ah in desktop-ka la dhameystiray waxay kuxirantahay baahida isticmaaleha
Hal shay shaqo kuma laha tan kale
Haddii ay tahay inaad aragto. Haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay inaad daalacatid oo aad warqad u sameysid waqti ka waqti qoraalka tifaftiraha, maxaad u dooneysaa KDE ama Gnome? LXDE waa ku filan tahay (inaan kuu sheegin Openbox, waxa dhacaya waa inaysan ahayn Desktop Environment)
Waan ku raacsanahay inay yihiin waxyaabo kala duwan, laakiin waxaan u maleynayaa in fikraddu ahayd in la yiraahdo (markaa way ka sii caddaan lahayd) in:
Xaqiiqda ah in desktop-ka uu ku qanacsan yahay (marka loo eego ku filnaan, baahi iyo rabitaan) adeegsadaha, waxay kuxirantahay astaamaha uu isticmaalehu qaato (sida ugu filan, lagama maarmaanka u ah iyo waxa loo jecel yahay isaga)
Dhab ahaantii Nepomuk = hehe suubban he 😉
Soo dhaweyn jony127:
Laakiin waxay curyaaminayaan adeegyada qayb ka ah hanka KDE, taas oo kadhigaysa macno ahaan ... La'aan Akonadi Kmail sifiican ugama shaqeeyo haba yaraatee, markaa waa inaad adeegsataa macmiil kale oo boosteejo ah. Marka adigu ma isticmaaleysid KDE buuxa. Waxay u egtahay in hadda aan u adeegsado Xfce guddiga Gnome, PCManFm oo ah maamule faylka iyo wixii la mid ah .. Mar dambe ma sii adeegsanayo Xfce ..
Haddii aysan la socon Ubuntu way ka soo horjeedaan! hehe kaftan….
... sifiican ayaan usii adeegsanayaa ubuntu xfce ama xubuntu si toos ah, waxay fududeeyaan rakibida dhakhsaha badan si loo yareeyo kombiyuutarada iyo internetka la'aan.
Cad! Waan jeclahay faa iidada X / Ubuntu, waxaad isla markiiba ku rakibi kartaa kumbiyuutarradii hore ee guriga adigoon internet helin.
Sure, oo kaliya maahan Ubuntu, laakiin waxyaabo badan oo kala duwan
Oo mar haddii shuruudihii la buuxiyay 1,2,3 iyo 3.1 la buuxiyay, haddii ay jiraan dhawr ikhtiyaar ayaa hadhay, kee la dooranayaa? Hagaag, qofkasta ama, talo ahaan, midkastaaba waqti ka waqti (maxaa yeelay dhammaantood waxay isbadalayaan nooc kasta waxaana jiri doona waqtiyo aad jeceshahay mid kale iyo, waqtiyo kale, mid kale).
12 sababood oo loo tijaabiyo Linux Mint 12